Mivezivezy eran-tany: Fampitomboana ny rindrambaiko mikoriana miaraka amin'ny fahatarana haingam-pandeha, kalabon'ny avo kokoa ary ny TCO ambany kokoa | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Featured » Mivezivezy eran-tany: Fampitomboana ny rindrambaiko mikoriana miaraka amin'ny fahatarana haingam-pandeha, scale kokoa, ary TCO ambany kokoa
Ny Streaming Global dia namorona ny fomba handefasana renirano mivantana amin'ny haingam-pandeha amin'ny fampiakarana amboara eran-tany amin'ny fampiasana fotodrafitrasa mahazatra, raha mampidina ny vola mahazatra amin'ny sehatra sy ny mpamatsy serivisy. Ny teknolojia streaminging Global sy voajanahary patanty dia mamadika ny mpizara fitehirizana rahona ho mpizara mivantana be haingam-pandeha tsy misy fametrahana rindrambaiko fanampiny amin'ny mpizara. Izany dia mamela ny fisintonana mivantana, zotra, OTT, sosialy ary VOD miaraka amin'ny fahitana lehibe maneran-tany amin'ireo mpanome rahona efa misy, toa an'i Microsoft Azure, Amazon AWS, ary rahona manokana / mahazatra. Miaraka amin'ny fomba tsy manam-paharoa mikoriana mivantana amin'ny alàlan'ny mpizara fitehirizana rahona, ny Streaming Global dia manafoana ny ampahany be indrindra amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fantsona mpandeha mahazatra, mampitombo ny hafainganana ary mampihena ny vidiny.
Ampiasao eo amin'ny lampihazo ny teknolojia streaminging Global:
Latency / fampiatoana ambany kely - Ny haavony dia hatramin'ny 60x haingana noho ny fantsom-pivoriana mahazatra mahazatra ary hatramin'ny 20x haingana noho ny tariby sy zanabolana mpamatsy, mitondra ny mpijery akaiky kokoa noho ny hetsika mivantana izay tian'izy ireo.
Scalability azo itokisana-mizana mizana manerantany ho an'ny mpijery am-polony maro manerana izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny famolavolana.
Fampandrenesana streaming sy angon-drakitra - vanim-potoana vaovao ho an'ny hetsika mivantana! Miaraka amin'ny Streaming Global, azonao atao ny mampifanaraka ny mpijery sy ny fitaovana tsirairay amin'ny alika mitovy, manome ny mpampiasa anao hanana traikefa jerena iraisana. Ohatra, alao sary an-tsaina ny tombontsoa amin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena: fitomboan-draha sy fahaizana mandray mpifaninana bebe kokoa amin'ny lalao.
Fametahana doka haingana kokoa / madio kokoa - Miaraka amin'ny streaminging Global dia afaka mampiditra doka eo amin'ny rindran-tsary ianao, tsy misy famotehana na fanelingelenana ilay loharano voalohany, rehefa manome traikefa toy ny fandaharana mivantana. Ny mpanao dokam-barotra aza dia afaka manamboatra doka manokana ho an'ny mpikambana rehetra amin'ny mpihaino azy.
TCO ambany (ny vidin'ny fananana rehetra) sy ny fampiasana angovo - Tetezo ny ankamaroan'ny saram-pandefasanao ary ahena ny habetsaky ny angovo ampiasaina amin'ny teknolojia mahomby kokoa an'ny Streaming Global. Ny tratranao dia afaka hahavita an'io amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo loharanom-pahalalana kely kokoa noho ny fomba fandefasana mahazatra.Viewers dia mila tetezamita tsy misy tomika rehefa mamadika ireo fitaovana hitan'izy ireo. Tian'izy ireo ny afaka hifanerasera amin'ireo mpijery hafa amin'ny sehatra sosialy. Tian'izy ireo ho fantatra fa ny hafa tsy mahazo tombony amin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena. Ny fomba fanaterana mpandeha an-tsokosoko dia efa lany andro ary tsy nahavita izany fangatahana izany - hatramin'izao.
Ny teknolojian'ny streaming Global dia mety amin'ny fampitana streaming 24/7 OTT fantsona sy hetsika mivantana misy votoaty tokana sy maro. Vahaolana maoderina, tsotra natokana ho an'ireo sehatra sy mpamatsy serivisy maniry ny hanolotra traikefa tsara indrindra ho an'ireo mpampiasa azy.
Azo atolotra miaraka amin'ny fahatarana fanadimy faharoa ny atiny raha jerena ireo mpijery an-tapitrisany amina ampahan-taonina karamaina ankehitriny.
Rehefa mihamangatsiaka ny ady mikoriana, dia mitombo haingana kokoa ny fitakian'ny mpijery ary ny ady atokana ho an'ny sehatra sy mpamatsy tolotra dia manolotra ny traikefa tsara indrindra. Mitohy ny fifamoivoizana mankany amin'ny serivisy IP, ary ny orinasa dia mitady hanolotra traikefa tsara indrindra ahafahana manatanteraka ny fitakiana. Mampalahelo fa ny fomba fandefasana fandefasana streaming ankehitriny dia tsy mahavita izany fangatahana izany ary manohy miady amin'ny famahana ireo teboka fanaintainana lehibe amin'ny fampisehoana, ny marika sy ny vidin'ny fandefasana ..
Ny fandefasana mivantana an-tsarimihetsika (fampandrenesana ny fanemorana tena ambany) dia tsy mbola nisy nanerana ny Internet ho an'ny daholobe, hatramin'izao.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Streaming Global, tsidiho azafady www.StreamingGlobal.com
fampitana injeniera fampitana Engineering fandraisana anjara Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor Litra Matthews OTT Spears & Arrows Storage Video injeniera 2020-05-15
Previous: Mpandraharaha momba ny famokarana - Fidirana amin'ny fidirana
Next: Ny fakantsary fakan-tsary feno B & H dia maka sary an-tsaina ny famokarana